Huwandu hweVanhu Vari Kurawara neCovid-19 muNyika Hwowedzera Zvakanyanya
Huwandu hwevanhu vari kurwara nechirwere cheCovid-19 munyika uho hwainge hwamboderera kusvika pazana nemakumi matanhatu nemana kana kuti 164 musi wa12 Gumiguru hwatanga kuwedzerazve zvakanyanya.
NeMugovera bazi rezvehutano rakazivisa kuti vanhu makumi maviri nemumwe vakabatwa nechirwere cheCovid-19 munyika uye vose havana nhoroondo yekushanya kunze kwenyika.
Izvi zviri kureva kuti vanhu vachiri kurwara nechirwere ichi vave mazana mana nemakumi matatu nevatatu kana kuti 433.
MuBulawayo ndimo mune vanhu vakawandisa vari kurwara vanosvika zana negumi nevatanhatu, Harare ine makumi manomwe nemumwe, Matabeleland South ine makumi matanhatu nemumwe, Matabeleland North makumi mashanu nevatanhatu uye dunhu rine vanhu vashoma shoma vari kurwara iMashonaland West ine vanhu vasere.
Huwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi hwasvika pazviuru zvisere nemazana manomwe nemakumi masere nematanhatu kana kuti 8, 786.
Vanhu vapora kusvika parizvino vave zviuru zvisere nemakumi mapfumbamwe nevatanhatu kana kuti 8, 096 mushure mekupora kwevanhu vasere neMugovera. Vanhu vafa nechirwere ichi kusvika parizino vave mazana maviri nemakumi mashanu nevanomwe kana kuti 257.
Zvichakadaro, mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana mapfumbamwe kana kuti 1, 9 million vabatwa nechirwere cheCovid-19 muAfrica. Vanhu vafa vasvika zviuru makumi mana nemasere ane zana nemana kana kuti 47, 104. Vapora vadarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana matanhatu kana kuti 1, 6 million.
South Africa ine vanhu vave kusvika zviuru mazana manomwe nemakumi mashanu kana kuti 750 000 vabatwa nechirwere icgi ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi muAfrica. Huwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose hwadarika mamiriyoni makumi mashanu nemana kana kuti 54 million.
Vafa muAmerica chete vanodarika zviuru mazana maviri nemakumi mana nemashanu kana kuti 245, 000, vabatwa nechirwere ichi vave kuda kusvika mamiriyoni gumi nechimwe kana kuti 11 miillion.
Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vanodarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana mapfumbamwe kana kuti 1, 9. Asi vapora vachida kusvika mamiriyoni makumi matatu nemashanu kana kuti 35 million.
Nyanzvi munyaya dzezvehutano uye vakambova mukuru wechipatara cheChitungwiza Dr Enoch Mayida vati vanhu vanofanira kugara vakangwarira nekuti vakarivara chirwere ichi chinogona kudzoka zvine hukasha zvochoiita muAmerica, Britain nedzimwe nyika.